Забур 112 CARS - Nnwom 112 AKCB
Nhyira nka onipa a osuro Awurade
na onya nʼahyɛde mu anigye pii.
2Ne mma bɛyɛ atumfo wɔ asase no so;
atreneefo awo ntoatoaso benya nhyira.
3Ahonya ne sika wɔ ne fi,
na ne trenee tena hɔ daa.
4Sum mu mpo hann pue ma nnipa a wɔteɛ,
ma ɔdomfo, mmɔborɔhunufo ne ɔnokwafo.
5Yiyedi bɛba wɔn a wɔn tirim yɛ mmerɛw na wɔde fɛm kwa,
wɔn a wɔde atɛntrenee yɛ wɔn nneɛma no so.
6Ampa ara ɔrenhinhim da biara da;
wɔbɛkae onipa trenee daa.
7Ɔte asɛmmɔne a, ɛmmɔ no hu;
ne koma si pi wɔ Awurade mu ahotoso mu.
8Ne koma wɔ bammɔ, na onsuro;
awiei no ɔde nkonimdi behyia nʼatamfo.
9Ɔtow nʼakyɛde pete aman so ma ahiafo nea wohia,
nʼadɔe no tena hɔ daa;
wɔbɛkae wɔn daa na wɔahyɛ wɔn anuonyam.
10Omumɔyɛfo behu ama ayɛ no yaw,
ɔbɛtwɛre ne se na wafɔn;
omumɔyɛfo tirimpɔw bɛyɛ ɔkwa.
AKCB : Nnwom 112